Ziziphi izinto ezilungileyo ze-Amazon ezithengisayo izixhobo ezisetyenziswayo?
Bonke abathengisi be-Amazon abaphumelelayo basebenzisa uluhlu lophando olunyanzelisayo kunye nezixhobo zokuhlalutya ukuphuhlisa ukuphuculwa kwazo kunye nokuqhuba ixabiso lokuthengisa kwisiqulatho semveliso. I-Amazon ikhathalela ngenzuzo yakho kwaye ikubonelela ngezixhobo ezisisiseko zokulawula iimveliso zakho kunye nomyalelo. Nangona kunjalo, le nkqubo ye-Amazon ayikwazi ukukunceda kwiimeko ezininzi. Yingakho kunengqondo ukusebenzisa izixhobo zentengiso ye-Amazon yangaphandle ekutsaleni abathengi abangakumbi kunye nokunyusa ingeniso.
Amathuluzi okuthengisa ama-Amazon anganelisa zonke iimfuno zezoshishino zakho, ngokuqala ngokuphanda amagama ophando olwenza izithuthi kunye nokugqiba nokugcina ixabiso lokuthenga ibhokisi.Ngoko, yonke into oyifunayo kukuqonda zonke iinketho zakho kunye nokufumana ukuxuba okufanelekileyo kwezixhobo ukuphatha kakuhle i-Amazon yakho ye-e-commerce operation.
Kule nqaku, siza kuxubusha ezinye izinto zokuthengisa ze-Amazon ezilungiselelwe ukutsala i-traffic eninzi kwi-Amazon yakho kwaye uqhube phambili kwi-Amazon.
Izixhobo zabangathanda ukufumana ukuhlawula ngokukhawuleza kwi-Amazon
Ngokwe-Amazon Intengiso I-Central kunye ne-Sales Central, abathengisi banokufumana iintlawulo zabo ngokuphindwe kabini kwinyanga. Ukuba ufuna ukukhawuleza le nkqubo (ngaphandle kokungathandabuzeki uyayifuna), kufuneka usebenzise enye yezixhobo zokuhlawula. Bakhonza ukunceda abathengisi bama-Amazon bahlawulwe ngokukhawuleza kunamaxesha amabini ngenyanga. Ukusebenzisa ezi zixhobo, unokufumana imali yakho imihla ngemihla. Olu hlobo lwenkonzo luyaziwa ngokuba yi-factoring. Izixhobo zokuhlawula ngokukhawuleza zihlawula abathengisi bama-Amazon imihla ngemihla ngokusekelwe kwiimali zabo zokuthengisa. Ezi zixhobo ziqokelela imali ngokukhawuleza ukusuka kwi-Amazon nganye kwishedyuli yokuhlawula rhoqo.
Ukuphunyezwa kwezixhobo ezinjalo, uya kukwazi ukukhulisa ishishini lakho ngokukhawuleza ngenxa yokungena ngokukhawuleza kwemali yakho nayiphi na ixesha oyifunayo. Kuya kukunika ithuba lokuziva uzimeleyo kwi-Amazon kwaye wenze utyalo-mali kwintsebenziswano lakho. Ngaphezu koko, uya kuba nokulawula ukuhamba kwemali ukuhlawula iindleko kwishedyuli yakho, kungekhona i-Amazon.
Isixhobo sokuhlawula umgangatho oza kufeza ngokufanelekileyo iimfuno zakho ze-Amazon zi-Payment. Esi sixhobo sinikeza iintlawulo zemihla ngemihla kubathengisi bazo zonke ubukhulu. Intengo yokuqala ngenyanga i-2% ye-Amazon yokuthengisa.
Izixhobo zalabo abafuna ukuqhuba igama elingundoqo kunye nophando lwemveliso
Ukuba ucinga ngamathuba emveliso e-Amazon, igama elingundoqo kunye nophando lwemveliso Izixhobo ziya kukunceda kakhulu. Ukusebenzisa izixhobo ezinjalo, uya kukwazi ukufaka inkcukacha kwi-Amazon yokukhangela idatha ukuze ubone ukuba ngabaphi abasebenzisi abathengisayo abasebenzisa ukufumana iimveliso zakho. Uyakwazi ukujonga umthamo wophendlo lwegama elingundoqo elikhethiweyo okanye ibinzana elibalulekileyo. Ungasebenzisa kwakhona ii-calculators zenzuzo ukufumanisa iindleko kunye nenzuzo yempembelelo kwixesha ngalinye lokusesha kwi-Amazon.
Ukufumana imigaqo yokukhangela kunye neemveliso eziza kuzisa inzuzo eninzi kwi-Amazon, kufuneka uqhube umkhankaso wophando olumgangatho ophezulu kwiphankaso yakho yokuphucula i-Amazon.Imigaqo yokukhangela yamanani ephezulu izakunceda ukuba udale uluhlu lwemveliso yokuthengisa i-Amazon SEO kwaye uzuze ukuthengisa okungaphezulu kwi-Amazon. Uninzi lweprojekthi yesicatshulwa yophando lwegama eliphambili lunokukunika idatha ekhuphisanayo, ukunika ingcamango efunyenweyo kwizinga eliphezulu kunye nenzuzo.
Kuninzi igama elingundoqo le-Amazon kunye nesixhobo sokuphanda ngemveliso kwiwebhu. Kufuneka uhlolisise okulungileyo kubo kwaye ufumane eyona nto ifanelekileyo kwishishini lakho.
Ububanzi bubungcali bokucwaninga be-Amazon enomgangatho osebenzayo ekufumaneni imigaqo yee-Amazon kunye nemveliso. Inceda ekufumaneni imigaqo yokukhangela yokuthengisa kunye nezinto ezixabisekileyo kunye nokwandiswa kweGoogle Chrome. Uluhlu lubonisa imimiselo yokukhangela ephakamileyo yemveliso ukukunceda ukuba uphume kwi-Amazon search. Enye enye inzuzo kukuba unokubona oko kukuqhuba ukuthengisa kwintengiso yakho.
Usebenzisa ithuluzi lophando lobuninzi, uya kukwazi ukuqonda iingeniso zakho ezinokuthi uzithengise. Unokufumana intengo, intlawulo, kunye nokulinganiswa kokuthengisa kwanoma yimuphi umkhiqizo kwi-Amazon. Zonke ezi nkcukacha ezibonelelwe nguNxweme ziya kukunceda unciphise uphando lwakho. Unokwazi ukufumana zonke iziphumo zakho kwifayile ye-CSV ukuze uhlalutye olongezelelweyo.
Intengo yokuqala ngenyanga iyingama-32. 50.
U-Sonar ungumsebenzisi we-keyword wophando lwegama elingundoqo wama-Amazon esekelwe bonke abaphandi kwi-data yangempela kwimibandela yokukhangela amakhasimende.U-Sonar usebenzisa i-algorithm eyinkimbinkimbi ukufumanisa oko bakho abathengi abakwaziyo ukufuna kwi-Amazon kwaye baqokele zonke ezi nkcukacha kwiziko labo. Ukuqhathaniswa namanye amathuluzi egama elingundoqo, uSonar unikezela abathengisi ngamathuba amaninzi afana ne-ASIN ukukhangela ngokutsha, uphando olwandisiweyo ukufumana amagama aphandleweyo, i-Amazon search volume ngegama ngalinye elingundoqo, kunye neminye imisebenzi ebalulekileyo.
Kufanelekile ukukhankanya ukuba iNonar iquka kuphela loo migaqo yokukhangela apho i-ASIN ifakwe kwiphepha lokuqala leemiphumo zophando.
Yisicelo sesiphequluli samahhala se-Chrome.
Kukho izixhobo zokuthengisa i-Amazon ezivumela abathengisi ukuba baphathe uluhlu lwemveliso ye-Amazon kunye ne-inventory ngaphandle kweMthengisi Dashboard ephakathi. Ezi zixhobo zorhwebo zidibanisa idatha ye-Amazon kwi-database yangaphandle. Ukuphunyezwa kwezi bathengisi bee-intanethi zingongeza kwaye zitshintshe iimveliso, ukuphucula uluhlu, ukulandelela ukulandelwa kwempahla, ukulungelelanisa ixabiso lentengo, kwanokusebenzisa imisebenzi eminye. Ezinye i-Amazon izixhobo zokufakwa kwezixhobo ziyakwazi ukuvumelanisa nedatha yakho yolwazi kwezinye iziteshi zokuthengisa. Ikunika ithuba lokuthengisa yonke imveliso yakho kwiindawo ezininzi zokuthengisa. Ngaphezu koko, unako ukulawula imiyalelo kunye nokuthunyelwa kuzo zonke iziteshi zokuthengisa.
Uninzi lwalezi zixhobo zolawulo lwezinto zokubala ulunikeza umgaqo-nkqubo wexabiso. Ngoko banako ukuxhasa abathengi ngeemfuno zokuthengisa ezininzi.
Ezi zixhobo zokuthengisa ziquka iSellerEngine Plus ($ 49. 95) - unikeza izixhobo zokulawula ezipheleleyo, uJoeLister (i-$ 29) - ukhonza ii-Amazon kunye nabathengisi be-eBay; I-Vendio (i-$ 99) - isebenzela ngokugqibeleleyo abathengisi bama-Amazon kunye namanye amaqonga okuhweba; I-SellBrite (i-$ 183) - i-suit yokuthengisa abathengisi kunye nabathengisi be-high-volume e-Amazon nakwezinye iindawo zokuthengisa Source .